Erga guyyaa Jimaata governor Kim seera baste booda se’ati 24 kessatti sababa coronavirus namni bay’e | KWIT
Magalaa Dakota County namni haarawni 3 qabamu himan, waligalatti namni covid-19 qabame 1,600 gaheera, duuti amoo nama 15 dha.
Governor Kim Reynolds nama qoratamu fedhe maraaf TestIowa birrati akka qorataman babal’isu jirti.
Hanga amma programa kuni itumaa fufaa hojjatotafi qoranaan kan kenamudha. Kim Reynolds akka jetteti kunii businessidhan yoom akka banamu qarqara.
Namni yoo qoratamu fedhee assessment Testiowa.com guutu qaba.
Ammatti kutaa Iowa kessati bakki qoranno TestIowa 8 tu jira. Western Iowa tech community college kan Sioux city keessati arguu dabalate.
Governor Nebraska Pete Ricketss June 1st bakka baayeti waligahii namota irratti seerawan kaasu karoorse jira.
Karoorsi kunis Tyson Foods plant, bakka umanni bayeen iraa dhukubsate kan Dakota City keessa jiru hin ilaalatu.
Magaala Nebraska mannen buna, zoos, tiytaara filmi fi bakka daakki irra deebi’a akka banamuufi concert xiqqaa fi carataan akka itti fufan taasisa.
Rickets manneen fayya walqixa akka ta’uu fi namooni jiruu isaani seeratti akka deebi’an fedhi akka qabu hime.
By Fatiya Adam • May 15, 2020
Magaala Sioux city naannawa metro sababa coronavirus namni 4 har’a du’uu himame, waliigalati name du’e magalaa Woodbury fi Dakota County 30 gahee jira.
Manni fayyaa Iowa akka gabaaseti namni 18 dabalataan du’uufi waliigalati namni du’e Iowa keessatti 336 gahuu himan.
Kutaa Iowa keessati namni haarawa qabame 400 yoo ta’u, magaala Woodbury keessati nama 38 fi 15 ammoo Dakota County kessayi. Waliigalatti magaala lamaan kan keessatti name qabame 3,600 gahee jira.